Taorian’ny 10 Taona Nitolomana, Miha-Antomotra Ny Fankatoavana Ilay Hany Fikambanana LGBT ao Mozambika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2017 6:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Ελληνικά, Italiano, Español, Português
Mpikambana ao amin'ny Lambda nandritra ny hetsika iray tamin'ny 2013. Sary : Lambda/Flickr, fampiasàna nahazoana alàlana.
Nahavita dingana iray lehibe mankany amin'ny fankatoavana azy araka ny lalàna ny Lambda, ilay hany fikambanana mpiaro ny zon'ny LGBT (pelaka, vavy sy vavy miaraka, sady lahy no vavy, ireo vavilahy ) any Mozambika, izay efa ho am-polo taona mahery nitolomana.
Namoaka didy ny Filankevitry ny Lalàm-panorenana ao Mozambika – mitovy amin'ny Fitsaràna Antampony – hoe tsy manitsakitsaka ny lalàm-panorenan'ny repoblika ny satan'ny Lambda, tsy araka izay nolazain'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta.
Hatramin'ny 2008, dia efa maro ny fangatahana napetraka mba hiraketana ara-panjakàna araka ny lalàna amin'ny maha-fikambanana azy , ny Lambda fa tsy nahoan'ny Ministeran'ny fitsaràna, ny sampan-draharaha miandraikitra ny firaketana ara-panjakana ireo fikambanana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena izany.
Araka ireo mpikatroka mafana fo, dia nanao tsilian-tsofina ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta fa tsy tokony ho noraisina ilay fangatahana satria nanohitra ny andàlana momba ny fikambanana ao amin'ny Lalàna 1991. Noraràn'io andàlana manokana io ny firaketana ara-panjakàna ireo fikambànana izay mikendry tanjona mifanohitra amin'ny ” fitsipika ara-môraly, ara-tsosialy ary ara-toekaren'ny firenena ary manohintohina ny zon'ny hafa na ny tombotsoam-pirenena”.
Tamin'ny 31 Oktobra, nambaran'ny Filànkevitra fa tsy araka ny lalàm-panorenana ilay andàlana raha manohitra izay voalaza ao amin'ny Andininy 52 ao amin'ny lalàm-panorenana, manao hoe : ” voarara ireo fikambanana mitàm-piadiana ara-tafika na ivelan'ny tafika sy ireo izay mandrisika ny herisetra, ny fanavakavahana, ny fankahalàna vahiny na ireo izay mikendry ny hanohitra ny lalàna”. Nandidy ny Filànkevitra fa ireo ihany no karazana fikambanana raràna tsy ho raketina ara-panjakana.
Tsy nilaza fikambanana manokana ny Filànkevitra, fa araka ny tale mpanatanteraky ny Lambda, Danilo da Silva, dia manokatra ny varavarany ho amin'ny fankatoavana ho ara-dalàna ilay fikambanana ihany ilay didy nony farany. Hoy izy tamin'ilay fantsona alemà Deutsche Welle:
Manafoana ny fanazavàna izay natao tsilian-tsofina taminay io fomba fijerin'ny Filànkevitra momba ny lalàm-panorenenana io amin'ny lafiny iray.
Ireo zon'ny LGBT aty Afrika
Manampy miandalana ny tontolo mba ho mety kokoa amin'ny vahoaka LGBT-n'i Mozambika ny fametrahana ny Lambda ho ara-dalàna, Mozambika izay iray amin'ireo firenena vitsy aty Afrika izay tsy manameloka ny fiarahan'ny mitovy fananahana. Ohatra, any Sodàna sy faritra vitsivitsy any Nizeria sy Somalia, fanamelohana ho faty no sazy amin'ny fiarahan'ny mitovy fananahana, ary figadràna mandra-pahafaty any Oganda, Tanzania ary Siera Leone.
Isan'ireo firenena mandefitra amin'ny olon'ny LGBT ilay zanatany Paortigey taloha. Cap-Vert, ohatra, no firenena faharoa tsy nanameloka ny fiarahan'ny mitovy fananahana, tamin'ny 2004, sady iray amin'ireo firenena afrikana enina nanao sonia tahirin-kevitra iray avy amin'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana manameloka ny fanitsakitsahana ny zon'ireo vitsy an'isa ara-pananahana.
Nasongadin'ny sasany amin'ireo Cap-verdiana mpahay lalàna ihany koa fa ny ampahany sasany amin'ny fehezandalàna sivily izay mametra ny fanambadiana ho an'ny olona tsy mitovy fananahana fotsiny dia tsy araka ny lalàm-panorenana satria efa tamin'ny talohan'ny fanambaràna ny lalàm-panorenana. Tamin'ny 2016, nahazo loka iraisam-pirenena maro ny fanadihadiana “Tchindas”, izay nilaza ny tantaran'i Tchinda Andrade, vavilahy mafana fo malaza ao amin'ny firenena.
Na izany aza, tsy afaka amin'ny fitsaràna an-tendrony sy ny herisetra ny olona LGBT, eny fa na dia any amin'ny firenena tsy dia be fepetra aza. Any Angola, izay malalaka ny lalàna rehefa resaka olona mitovy fananahana miaraka, dia miaina tsy ankiteniteny ny vondrom-piarahamonina LGBT ary miatrika fanavakavahana amin'ny fitsaboana sy ny fanabeazana, araka an'i Carlos Ferandes, talen'ny Associação Iris Angola.
Amin'ny ankapobeny, notsikerain'ny sehatra sasany avy amin'ny fiarahamonina ilay fanapahankevitry ny Filànkevitry ny Lalàm-panorenana Mozambikana. Ao amin'ilay lahatsoratra amin'ny aterineto be mpaneho hevitra nozarain'ilay mpanao gazety, Ericino de Salema, ohatra, dia betsaka ny manohitra ny fankatoavana ny Lambda sy ny fiarahan'ny mitovy fananahana.
Namaly ireo fanehoankavitra ireo tao anaty lahatsorata i Danilo da Silva, tale mpanatanteraky ny Lambda :
Mahita fankahalana be dia be amin'ireo izay te-hampiasa ny fahefana jadon'ny fanjakana mba hanamafisana ny fitsaràna an-tendron'izy ireo aho. Henatra izany satria ny miaina ao anaty fiarahamonina iray dia mahafantatra ny fomba fanajàna ny hafa, na dia tsy miray fo amin'ny safidim-piainany aza isika, raha mbola tsy manelingelina antsika ry zareo.
Zo ho an'ny mozambikana rehetra ny zo fototra, tsy misy tombony ho an'ny sasany izany.
Ndeha isika rehetra haka fotoana hianatra ity didy ity, izay tsy fandresena ho an'ny vahoaka LGBT ihany, fa ho an'izay hafa sy tsy mitovy hevitra rehetra. Antsan'ny fitoviana, fandriampahalemana ary firindràna ara-tsosialy ity didy ity.
Ankehitriny, tena mirehareha amin'ny maha-mozambikana ahy aho.